गोपनीयता जानकारी को उपयुक्त प्रवाह गर्न एक सही छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूले सङ्घर्ष सक्छ जहाँ एक तेस्रो क्षेत्र गोपनीयता छ। रूपमा Lowrance (2012) यो एकदम succinctly राख्नु: "। मान्छे सम्मान गर्नुपर्छ किनभने गोपनीयता सम्मान गर्नुपर्छ" गोपनीयता तथापि, कुख्यात गंदा अवधारणा हो (Nissenbaum 2010, Ch. 4) , र, जस्तै गाह्रो प्रयास गर्दा प्रयोग गर्न छ अनुसन्धान बारेमा विशेष निर्णय गर्न।
गोपनीयता सोच्न एउटा साधारण तरिका सार्वजनिक / निजी dichotomy छ। सोचाइ यो मार्ग गरेर, जानकारी सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य छ भने, त्यसपछि यसलाई अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ मानिसहरूको गोपनीयता उल्लङ्घन बारेमा चिन्ता बिना। तर यो दृष्टिकोण समस्याहरुमा चलान गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, नोभेम्बर 2007 मा COSTAS Panagopoulos सबैलाई तीन शहरहरूमा निर्वाचनमा आगामी बारेमा एक पत्र पठाएको छ। दुई सहर-मोन्टिसेलो, आयोवा र हल्याण्ड, मिशिगन-Panagopoulos प्रतिज्ञा मा / अखबार मा मतदान गरेकी मानिसहरूको सूची प्रकाशित धम्की। अन्य शहर-Ely मा, लोवा-Panagopoulos प्रतिज्ञा / अखबार मा मतदान नगर्ने मानिसहरूको सूची प्रकाशित धम्की। यी उपचार घमण्ड र लाज induce बनाइएका थिए (Panagopoulos 2010) यी भावनाहरू पहिले अध्ययन मा .वाराणसी प्रभाव पाइएको थियो किनभने (Gerber, Green, and Larimer 2008) । बारेमा वोट र नगर्ने संयुक्त राज्य अमेरिका मा सार्वजनिक छ नगर्ने जानकारी; कसैले यसलाई उपयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले, यस मतदान जानकारी पहिले नै सार्वजनिक किनभने, अखबार मा प्रकाशन शोधकर्ता संग कुनै समस्या छ कि तर्क सक्छ। अर्कोतर्फ, कि तर्क बारे केही धेरै मानिसहरूलाई गलत हुन्छिन्।
यो उदाहरण देखाउँछ रूपमा, सार्वजनिक / निजी dichotomy पनि भुत्ते छ (boyd and Crawford 2012; Markham and Buchanan 2012) । गोपनीयता सोच्न अझ राम्रो बाटो, एक विशेष गरी डिजिटल उमेर द्वारा खडा मुद्दाहरू ह्यान्डल गर्न डिजाइन, प्रासंगिक निष्ठाको विचार छ (Nissenbaum 2010) । जानकारी सार्वजनिक वा निजी विचार भन्दा बरु, प्रासंगिक निष्ठा जानकारी प्रवाह मा केंद्रित। उदाहरणका लागि, आफ्नो डाक्टर अर्को डाक्टर आफ्नो स्वास्थ्य रेकर्ड साझेदारी यदि धेरै मानिसहरू unbothered हुनेछ तर आफ्नो डाक्टर एक मार्केटिङ कम्पनी यो नै जानकारी बेचेको यदि दुखी हुनेछ। तसर्थ, अनुसार Nissenbaum (2010) , "गोपनीयता एउटा सही गोप्य एउटा सही न वा नियन्त्रण गर्न एक सही तर व्यक्तिगत जानकारी को उपयुक्त प्रवाह गर्न एक सही छ।"
प्रासंगिक निष्ठा अन्तरनिहित प्रमुख अवधारणा सन्दर्भ-नातेदार जानकारी मान्यता छ (Nissenbaum 2010) । यी विशिष्ट सेटिङमा जानकारी प्रवाह शासन भनेर मान्यता हो, र तिनीहरूले तीन मापदण्डहरु द्वारा कटिबद्ध छन्:
अभिनेता (विषय, प्रेषक, प्रापक)
विशेषताहरु (सूचना को प्रकार)
प्रसारण सिद्धान्तहरू (अवरोध जो अन्तर्गत जानकारी बग्छ)
तसर्थ, अनुमति बिना डाटा प्रयोग गर्न चाहे निर्णय गर्दै एक शोधकर्ता रूपमा जब यो उपयोगी सोध्न, Panagopoulos को मामला फर्केपछि छ "यो प्रयोग सन्दर्भ-नातेदार जानकारी मान्यता उल्लङ्घन गर्छ?" (2010) यो मामला मा, एक बाहिर भएको अखबार जानकारी मान्यता उल्लङ्घन संभावना देखिन्छ मा शोधकर्ता मतदाता वा गैर-मतदाता सूची प्रकाशन। वास्तवमा, Panagopoulos आफ्नो प्रतिज्ञा / खतरा मा मार्फत अनुकरण गरे किनभने स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरु उहाँलाई अक्षरहरू लगाया र यो एक राम्रो विचार होइन भनेर उसलाई उक्साए (Issenberg 2012, 307) ।
अन्य सेटिङहरू मा तथापि, सन्दर्भ-नातेदार जानकारी मान्यता सोचिरहेका अलि विचार गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, गरेको, म यो अध्याय परिचय छलफल गर्ने एक मामला 2014 मा इबोला पश्चिम अफ्रीका मा फैलन समयमा गतिशीलता ट्रयाक गर्न मोबाइल फोन कल लग प्रयोग को संभावना फर्कन गरौं (Wesolowski et al. 2014) । यो सेटिङ मा, हामी दुई फरक परिस्थिति कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ:
अवस्था 1: पूर्ण कल लग डेटा पठाउने [विशेषताहरू]; अपूर्ण वैधता [अभिनेता] को सरकारको गर्न; कुनै पनि सम्भव भविष्यको लागि प्रयोग [प्रसारण सिद्धान्तहरू]
अवस्था 2: पठाउने आंशिक anonymized रेकर्ड [विशेषताहरू]; सम्मान विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं गर्न [अभिनेता]; विश्वविद्यालय को निरीक्षण गर्न इबोला फैलन र विषय प्रतिक्रिया प्रयोगको लागि नैतिक बोर्डहरू [प्रसारण सिद्धान्तहरू]
पनि यी अवस्थाहरू दुवै डाटा कम्पनी बाहिर बगिरहेको छन् कलमा यद्यपि, यी दुई परिस्थिति सम्बन्धमा जानकारी मान्यता छैन नै, किनभने विशेषताहरू, र प्रसारण सिद्धान्तहरू समावेश अभिनेताहरु बीच मतभेद छन्। यी मापदण्डहरु को एक मात्र ध्यान केन्द्रित अचाक्ली simplistic निर्णय बनाउने निम्त्याउन सक्छ। वास्तवमा, Nissenbaum (2015) यी तीन मापदण्डहरु को कुनै पनि अरूलाई कम गर्न सकिँदैन, कि न त तिनीहरूलाई कुनै पनि एक व्यक्तिगत जानकारी मान्यता परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ जोड दिन्छ। किन विगतका प्रयास-कि त विशेषताहरु वा प्रसारण केन्द्रित छन् सिद्धान्तहरू-छ गोपनीयताको साधारण-अर्थमा शिक्षामा कब्जा मा अप्रभावी भएको जानकारी मान्यता यो तीन-आयोमी प्रकृति बताउँछन्।
निर्णय पुस्तिका सन्दर्भको-नातेदार जानकारी मान्यता को विचार प्रयोग गरेर एक चुनौती भनी अनुसन्धानकर्ताहरू अगाडि तिनीहरूलाई थाहा छैन सक्छ र तिनीहरूले मापन गर्न धेरै गाह्रो हो (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) । यसबाहेक, केही अनुसन्धान स्वतः अनुसन्धान हुन हुँदैन भन्ने होइन कि प्रासंगिक-नातेदार जानकारी मान्यता उल्लङ्घन थियो भने पनि। वास्तवमा, अध्याय 8 Nissenbaum (2010) सम्पूर्ण बारेमा छ "राम्रो लागि नियम तोडेर।" यी जटिलताहरु भए तापनि सन्दर्भ-नातेदार जानकारी मान्यता अझै पनि गोपनीयता सम्बन्धित प्रश्नहरू बारे तर्क गर्न धेरै उपयोगी तरिका हो।
अन्तमा, गोपनीयता म कहाँ व्यक्तिका लागि आदर प्राथमिकता गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले र Beneficence प्राथमिकता गर्नेहरूलाई बीच धेरै गलत अर्थ देखेका छौँ एक क्षेत्र हो। चुपके किनभने स्वच्छता समझ एक उपन्यास संक्रामक रोग फैलाउने रोकन गर्न महत्वपूर्ण छ मान्छे वर्षा लिएर हेर्छ जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता को मामला कल्पना गर्नुहोस्। Beneficence ध्यान अनुसन्धानकर्ताहरूले यो अनुसन्धान बाट समाजलाई लाभ ध्यान केन्द्रित थियो र त्यहाँ सहभागीहरूलाई कुनै हानि छ भन्ने शोधकर्ता पत्ता लगाउने बिना उनको गुप्तचर गर्छ भने पनि तर्क हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, व्यक्तिका लागि आदर प्राथमिकता जो शोधकर्ताओं शोधकर्ता आदर मान्छे उपचार छ कि छैन र तिनीहरूको गोपनीयता भङ्ग गरेर तिनीहरूलाई हानि गरिरहेको तथ्य छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान केन्द्रित हुनेछ। दुर्भाग्यवश, यो (यस मामला मा सबै भन्दा राम्रो समाधान बस सहमति माग्न हुन सक्छ हुनत) यो अवस्था को विवादित दृश्य समाधान गर्न सजिलो छैन।
अभिनेता (विषय, प्रेषक, प्रापक), विशेषताहरु: निष्कर्ष मा, गोपनीयता बारेमा तर्क गर्दा, यो उपयोगी भएको अचाक्ली simplistic सार्वजनिक / निजी dichotomy परे सार्न र सन्दर्भ-नातेदार जानकारी मान्यता, माथि तीन तत्व बनेको हो, जो बारेमा सट्टा तर्क छ (जानकारी को प्रकार), र प्रसारण सिद्धान्तहरू (अवरोध जानकारी बग्छ जसको तहत) (Nissenbaum 2010) । जबकि अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूले र नै एक हानि रूपमा गोपनीयता को उल्लंघन हेर्न केही अनुसन्धानकर्ताहरूले, गोपनीयता को उल्लंघन देखि सक्छ कि हानि को मामला मा गोपनीयता मूल्याङ्कन। धेरै डिजिटल प्रणाली मा गोपनीयता को शिक्षामा समय परिवर्तन भएकोले व्यक्ति व्यक्ति बाट भिन्न र परिस्थितिको अवस्था देखि भिन्न (Acquisti, Brandimarte, and Loewenstein 2015) , गोपनीयता केही लागि अनुसन्धानकर्ताहरूले लागि कठिन नैतिक निर्णय स्रोत हुन संभावना छ समय।